Welcome To MINISTRY OF HEALTH AND SPORTS | MINISTRY OF HEALTH AND SPORTS
Radio Talk & TV
TM Drug & Garden
University of TM & Institute of TM
Posters / Pamphlet
Breaking News : ရှေးဟောင်းမြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးကျမ်းများဆိုင်ရာ စာပေပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ် မည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း။
Breaking News : တိုင်းရင်းဆေးပညာမဂ္ဂဇင်း အမှတ်စဉ်(၃၀)တွင် ပါဝင်ရေးသားရန် စာမူများ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ရှေးဟောင်းမြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးကျမ်းများဆိုင်ရာ စာပေပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ် မည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း။
Fri , Dec 08 2017 - 06 am
အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူးပြုလုပ် သော ရှေးဟောင်းမြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးကျမ်းများဆိုင်ရာ စာပေပြိုင်ပွဲကို ဇန်နဝါရီလအတွင်း ကျင်းပ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် မိမိတို့ ဒေသအတွင်းရှိ ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်လိုသည့် (တဆ) မှတ်ပုံတင်ရှိသူ တိုင်းရင်းဆေးဆရာများ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာများအား (၃၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့ အရောက် တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) သို့ပေးပို့ပါရန် ပူးတွဲပါကြော်ငြာချက်နှင့်အတူ အကြောင်းကြား ပါသည်။
Tue , Dec 05 2017 - 07 am
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ ကျန်မာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ ခွဲဝေချထားပေးသော ယာဉ်များထဲမှ Ambulance (လူနာတင်ယာဉ်)(၃)စီးတို့အား တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနသို့ ခွဲဝေချထားခဲ့ပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၁၇ မတ်လအထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ အကျဉ်းချုပ်
Fri , Sep 08 2017 - 06 am
တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားသည့် ကျန်းမာရေးမူဝါဒများနှင့် အညီ ပြည်သူလူထု၏ကျန်းမာရေးအဆင့်မြင့်မားစေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီး ဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုခံယူ၍ ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
စာတမ်းရှင်များ သိရှိလိုက်နာရမည့်အချက်များ (Instructions to Authors)
စာတမ်းအကျဉ်းသည် စာလုံးရေ ၃၀၀မှ ၅၀၀အတွင်းဖြစ်ရပါမည်။ စာတမ်းအကျဉ်းတွင် စာတမ်းအမည်၊ စာတမ်းပြုစုသူ(များ)၊ လိပ်စာ/ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လေ့လာသည့်အကြောင်းအရာ/ အဓိကရှာဖွေချက်/ သုတေသနဆိုင်ရာ/ တိုင်းရင်းဆေးပညာဆိုင်ရာ အရေးကြီးအချက်အလက်နှင့် သုံးသပ်ချက်တို့ပါ၀င်ရပါမည်။ စာတမ်းအကျဉ်းတွင် မိမိ၏စာတမ်းနှင့်ပက်သက်သည့် အချက်အလက် အကျဉ်းချုပ်ပါ၀င်ရပါမည်။
၁၆ ခုတင်ဆံ့ ပေါက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးရုံဖွင့်ပွဲ
၂၅ ခုတင်ဆံ့ သထုံခရိုင် မွန်ပြည်နယ် တိုင်းရင်းဆေးရုံဖွင့်ပွဲ
၂၅ ခုတင်ဆံ့ မြင်းမူတိုင်းရင်းဆေးရုံဖွင့်ပွဲ
၁၆ ခုတင် ဆံ့ ဒီးမောဆိုမြို့နယ်၊ တိုင်းရင်းဆေးရုံဖွင့်ပွဲ
၁၆ ခုတင်ဆံ့ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် တိုင်းရင်းဆေးရုံ ဖွင့်ပွဲ
Office No.(47),Ottara Thiri Township,
+95 67 43 1095,+95 67 431149
This is the official website of Department of Traditional Medicine
© 2017-2018 by Ministry of Health and Sports. All rights reserved.